Old Mutual’s share price is key focus in Zimbabwe’s currency war - The Zimbabwe Mail
HomeBankingOld Mutual’s share price is key focus in Zimbabwe’s currency war
The share price of one of Africa’s oldest insurers is taking center stage in Zimbabwe’s battle to bring order to its chaotic foreign-exchange system. Photo: Simphiwe Mbokazi African News Agency (ANA)
INTERNATIONAL – The share price of one of Africa’s oldest insurers is taking centre stage in Zimbabwe’s battle to bring order to its chaotic foreign-exchange system.
The OMIR is one of multiple exchange rates Zimbabweans use daily to navigate the nation’s myriad economic challenges, including annual inflation of almost 800 percent.
Old Mutual’s Zimbabwe stock rallies as a hedge against currency
Despite the move, investors poured into Old Mutual, using it as a proxy to the US dollar because of its offshore listings, pushing the Zimbabwe-listed stock up 90 percent since the beginning of May. The shares in Johannesburg and London were little changed, resulting in the implied rate doubling to 122 as the gap between the securities widened.
Discussions over the halting of trade on the stock exchange are ongoing and the outcome is still uncertain, SEC Chief Executive Officer Tafadzawa Chinamo said by phone. Zimbabwe Stock Exchange Chief Executive Justin Bgoni said on Sunday that the bourse would wait for guidance from regulators.